အခြေခံ လူတန်းစား တွေရဲ့စားဝတ် နေရေး အတွက် စိတ်ပူမိတယ် ဆိုတဲ့ ဂျွန်လွင် – ThuThuLay
(၂၀၁၉) ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလောက် ကတည်းက စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကတော့ အခုဆိုရင် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွား လာခဲ့တာ တစ်နှစ်နီးပါး ရှိနေပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အခြားနိုင်ငံတွေလောက် ရောဂါပိုးကူးစက်ပျံ့နှံမှုမများခဲ့ပေမယ့်လည်း လတ်တလောမှာတော့ ဒုတိယလှိုင်းပြန်လည်စတင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြန်လည်မြင့်တက် လာတဲ့ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူတွေ့ကြောင့် အစစအရာရာ လည်ပတ်နေပြီလို့ ထင်ထားကြတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ် တွေလည်း ပြန်လည်စတင်လာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ပထမတစ်ခါ အလုပ်တွေအကုန်ရပ်သွားချိန်မှာတောင် စားဝတ်နေရေးထိခိုက်ကြကုန်တဲ့သူတွေ အများကြီးမို့ ဒီတစ်ခေါက်သာ ထပ်ပြီး ရပ်ခဲ့ရင် ပိုဆိုးကုန်မှာ အမှန်ပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ…
ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော် ဂျွန်လွင်တစ်ယောက် လည်း ပြန်လည်စတင်လာတဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကြောင့် အိပ်မပျော်နိုင်ဖြစ်နေပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ” covid19 ရယ်ထွက်သွားပါတော့…. မနက် 4.30 am ထဲက ငါပြန်အိပ် မပျော်တာ ငါအတွက်ထက် ငါဝန်ထမ်းတွေရယ်….. ငါတို့မြန်မာနိင်ငံရဲ့ အခြေခံပြည်သူတွေအတွက်စားဝတ်နေရေးစိတ်ပူလိုက်တာ” ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေလာပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ… အခုလိုအချိန်ကတော့ အားလုံးစိတ်ပူနေရတဲ့အချိန်မို့ ရောဂါပိုးဆက်လက်မပြန့်ပွားအောင် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နော်။
အခွခေံ လူတနျးစား တှရေဲ့စားဝတျ နရေေး အတှကျ စိတျပူမိတယျ ဆိုတဲ့ ဂြှနျလှငျ
(၂၀၁၉) ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလောကျ ကတညျးက စတငျဖွဈပှားခဲ့တဲ့ ကိုဗဈကပျရောဂါ ကတော့ အခုဆိုရငျ ဆကျတိုကျဖွဈပှား လာခဲ့တာ တဈနှဈနီးပါး ရှိနပွေီလို့ ဆိုရမှာပါ။ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ အခွားနိုငျငံတှလေောကျ ရောဂါပိုးကူးစကျပြံ့နှံမှုမမြားခဲ့ပမေယျ့လညျး လတျတလောမှာတော့ ဒုတိယလှိုငျးပွနျလညျစတငျနပွေီ ဖွဈပါတယျ။
ရကျပိုငျးအတှငျး ပွနျလညျမွငျ့တကျ လာတဲ့ ရောဂါပိုးတှရှေိ့သူတှကွေ့ောငျ့ အစစအရာရာ လညျပတျနပွေီလို့ ထငျထားကွတဲ့ ပွညျသူတှရေဲ့စိုးရိမျ တှလေညျး ပွနျလညျစတငျလာပွီလို့ ဆိုရမှာပါ။ ပထမတဈခါ အလုပျတှအေကုနျရပျသှားခြိနျမှာတောငျ စားဝတျနရေေးထိခိုကျကွကုနျတဲ့သူတှေ အမြားကွီးမို့ ဒီတဈခေါကျသာ ထပျပွီး ရပျခဲ့ရငျ ပိုဆိုးကုနျမှာ အမှနျပါပဲ ပရိသတျကွီးရေ…
ပရိသတျရဲ့အခဈြတျော ဂြှနျလှငျတဈယောကျ လညျး ပွနျလညျစတငျလာတဲ့ ကိုဗဈကပျရောဂါ ကွောငျ့ အိပျမပြျောနိုငျဖွဈနပွေီ ဆိုတဲ့အကွောငျးကို ရငျဖှငျ့ခဲ့ပါတယျ။ ” covid19 ရယျထှကျသှားပါတော့…. မနကျ 4.30 am ထဲက ငါပွနျအိပျ မပြျောတာ ငါအတှကျထကျ ငါဝနျထမျးတှရေယျ….. ငါတို့မွနျမာနိငျငံရဲ့ အခွခေံပွညျသူတှအေတှကျစားဝတျနရေေးစိတျပူလိုကျတာ” ဆိုပွီး ရေးသားမြှဝလောပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ… အခုလိုအခြိနျကတော့ အားလုံးစိတျပူနရေတဲ့အခြိနျမို့ ရောဂါပိုးဆကျလကျမပွနျ့ပှားအောငျ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျထိနျးခြုပျကာကှယျကွဖို့ တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျနျော။
မိမိတို့နိုင်ငံနဲ့အငြင်းပွားကျွန်းစုအနီး စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေ မပြုလုပ်ဖို့ ဗီယက်နမ်က တရုတ်ကို သတိပေး